Haa deebinu! Utuma sirbinuu nyaatamne. Har’as utuma sirbinuu dubbiin nu jala darbuuf jirti – Kichuu
HomeAfaan OromooVideosHaa deebinu! Utuma sirbinuu nyaatamne. Har’as utuma sirbinuu dubbiin nu jala darbuuf jirti
Haa deebinu! Utuma sirbinuu nyaatamne. Har’as utuma sirbinuu dubbiin nu jala darbuuf jirti.
Ammas gaaffiin uummataa hin deebine. Ammas command postin nurraa hin kaane.
Ammas waraana Oromoo irratti bobbaasun hin dhaabbanne. Ammas Oromoo ajjeesuun yokaa mana hidhaatti guuruun hin dhaabbanne. Ammas kan qabanii hidhaatti darbatan dararuun hin dhaabbanne. Ammas barattoonni Oromoo al tokko nafxanyaa dhan al tokkoo ammoo motummaa dhaan dararamuun irraa hin dhaabbanne.
Ammas weerarri fi saamichi lafaa (seerri kan hin beekne) itti fufeet jira. Ammas lafa ofirraa buqqa’uun hin dhaabbanne. Ammas daangaan Oromoo hin kabajamne. Daangaa darbanii uummatadararuun, lafaa fi qabeenya saamuun, uummata nagaa shororkeessun itti fufeet jira. Ammas Oromoo akka sabaatitti maqaa xureessun, duula miidiyaa irratti geggeessuun, Qeerroo fi Qarree yakkuun, hogganoota, hayyoota, artistoota, fi barsiistoota amantaa maqaa ololaan balleessun bal’inaan itti fufeet jira. Mirgi Oromoo magaalaa Finfinnee irraa qabu dagatamee (inumaayyuu awwaalamee) jira.
Magaaloonni Oromiyaa hunda irraa fudhachuuf nafxanyoonni fi dallaalonni gurmaa’anii, karoora baafatanii, caasaa ijaarratanii itti bobba’aniiru. Oromoon mirgasaa magaalotasaa irratti qabu dhabaat (‘loosing the right to one’s cities isa jedhamu keesa darbaat) jira. Qabeenyi Oromoo (lafti, albuudni, kkf hundi) invastaroota dhuunfaatti gurguramaat jira. Namni dhaabsisu hin jiru.
Rakkoon jireenyaa hammaachaatuma, guyya guyyaan cimaatuma, itti fufeera.Nageenyi dhabameera. Yakki saamichaa baay’ateera. Seera kabachiisun laafateeraa, ykn hin jiruuyyu.Uummanni kana hunda baattateet obsaan filannoo eeggata. Motummaan MM Abiy gama isaatin sagalee Oromoo ukkaamseetuma aangosaa cimsatee, Oromiyaa diigee, feedhii dimokraasii awwaalee, “Itiyoophiyaa Oromoo irraa olchee tiksuuf” jecha balaa itti waamaat jira.
Dhaabbileen siyaasaa Oromoo maalitti jiru? Gaaffii dha. Kanaaf sirba itti jirru kana gab goonee, rakkoolee nu nyaachuf jiran kana furuuf xiyyeeffachuun dirqama yerroo ammaati
#ABO #Finfinnee #Galma_Bar_Kumee, 2020.